दूर्जेय चेतना: चेतना शून्यमा जानु योग हो वा मृत्यु?
Browse » Home » लेख/रचना » चेतना शून्यमा जानु योग हो वा मृत्यु?
4 comments to “चेतना शून्यमा जानु योग हो वा मृत्यु?”
fantastic article for spiritualism divineness
कैलेकाँहि चिमोट्छन् मलाई पनि यस्ता विषयले तर पार पाईनसक्नुका लाग्छन् यि कुराहरु मलाई । एकताका यस्तै कुरामा रुमलिएर लेखेको यौटा शेर याद आयो -
उज्यालो खोज्छौ कति के सूर्य कम्ति छ र?
आदि हो या अन्त्य दुबै छ अँध्यारो साथी ।
लेख बुझ्न गार्हो छ, तर राम्रो लाग्यो । के जीबन र मरन एक सिक्काका दुइ पाटा हुन्।
i am feeling too much complicated to write about this topics...........
i am studying this from some years and still confused.